Tag: Kushambadzira Mavhidhiyo
Vhidhiyo imwe yenzvimbo iyo ini ndiri kunyatso kuyedza kukwira gore rino. Nguva pfupi yadarika ndakaita podcast naOwen weVhidhiyo Yekushambadzira Chikoro uye akandikurudzira kuti ndiwedzere simba mukati. Ini nguva pfupi yadarika ndakachenesa chiteshi changu cheYouTube - zvese kwandiri pachangu neku Martech Zone ) Ndakavaka
Isu takango govana infographic pane kukosha kwekushambadzira kunoonekwa - uye izvo, zvokwadi, zvinosanganisira vhidhiyo. Isu tanga tichiita toni yevhidhiyo yevatengi vedu nguva pfupi yadarika uye iri kuwedzera zvese kubatanidzwa uye shanduko mitengo. Kune akawanda marudzi eakarekodhwa, akagadzirwa mavhidhiyo aunogona kuita… uye usakanganwe chaiyo-nguva vhidhiyo paFacebook, yemagariro vhidhiyo pa Instagram uye Snapchat, uye kunyangwe Skype mabvunzurudzo. Vanhu vari kudya huwandu hwakawanda hwevhidhiyo. Nei Uchifanira
Renderforest: Chaiyo-Nguva Vhidhiyo Kugadziridza uye Mifananidzo Matemplate Pamhepo
Svondo, Kukadzi 23, 2020 Mugovera, January 23, 2021 Douglas Karr
Tiri kuvhura nhevedzano nyowani yemabvunzurudzo pano nekukurumidza pane yekushambadzira tekinoroji blog nerubatsiro rweCreative Zombie Studios. Podcast yedu iripo neEdge yeWebhu Radio inoshamisa uye inovhenekera munzvimbo muIndipolis neMugovera masikati paRusununguko 95… asi dzimwe nguva tinofanirwa kuchera zvakadzika netarenda ratiri kuda kubvunzurudza. Nemumhanzi wepashure kubva kubhendi reshamwari, Brad nechikwata chake vakaisa pamwechete izwi rekutanga guru